Tallaallada carruurta | khayraadka Health ka USAHello | USAHello
Waalidiinta doonaya in ay carruurtooda ka difaaco dhib iyo cudur. Baro waxa tallaalka iyo sida ay u shaqeeyaan. Ogow sida si aad u hesho tallaalka carruurtaada iyo macluumaad kale oo ku saabsan caafimaadka carruurta.
A tallaalka waa walax in laga hortago in qof ka qaadaan cudur ah. Tallaalada (sidoo kale loo yaqaan talaalka) caawiyo dadka looga fogaado cudurada ka hor waxay u baahan yihiin daaweyn. Waxay horumariyaan xasaanad cudurka. Sidaas darteed, iyagu waa lagama yaabo inay qaadaan.
Carruurta USA si joogto ah u hesho tallaalada si looga caawiyo inay caafimaad. Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee horumarinta jadwal u gaar ah oo ay raacaan marka carruurta laga tallaalo. Waxaa muhiim ah in carruurta aad u hesho tallaalada ay waqtiga maxaa yeelay waxa ay ka caawisaa iyaga aad caafimaad iyo cudur free.
Waxaad ka heli kartaa oo tallaalka carruurta lagula talinayaa by dhakhaatiirta waxa da'da. tallaalada badan oo waa in la siiyaa hore ee nolosha ilmaha. Weydii dhakhtarkaaga haddii aad qabtid wax su'aalo ah.
Waxaa jira laba websites wanaagsan u helo war dheeraad ah oo ku saabsan caafimaadka carruurta iyo daryeelka caafimaadka ee USA.
Kids Caafimaadka waa website a macluumaad loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta oo ku saabsan noocyo kala duwan oo mawduucyo la xiriira caafimaadka kids '. Marka aad hesho si aad website-ka, dooran "For Parents." Waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo faa'iido ah oo ku saabsan tallaalka carruurta iyo su'aalaha caafimaadka ilmaha kale laga yaabaa in aad leedahay. Waxaad baran kartaa koriinka iyo horumarka ee ilmahaaga, cudurada caruurta caadiga ah, oo u badan, ka badan.
Ethnomed ayaa tiro ka mid ah ilaha la xiriira caafimaadka ilmaha oo lagu turjumay afaf kala duwan.
Sidee si ay u tagaan dhakhtarka
Waa maxay dhakhtar
DKMG ah waalidka korinta carruurta yar yar ee dal cusub
DKMG ah waalidka korinta carruurta dal cusub